Abavelisi Bezifundi | I-China Stud ababoneleli, iFektri
Idiphu Hot kwalenza evulwa
Dip Hot kwalenza kwalenza
Idiphu Hot kwalenza iindawo olungisiweyo
Ukuqhuba ucingo lomsila
Torsional uchebe bolt for st ...
I-bolt enkulu yehexagon yentsimbi ...
Isilumko sekhanda se-welding
Iimveliso ezinceda iimfuno zempilo yabemi. Ngokwe-WHO, ezi mveliso kufuneka zifumaneke "ngamaxesha onke, ngezixa ezaneleyo kwiifom zedosi ezifanelekileyo, ngomgangatho oqinisekileyo kunye nolwazi olwaneleyo, kwaye ngexabiso umntu kunye noluntu abanokufikelela". Iimveliso ezinceda iimfuno zempilo yabemi. Ngokwe-WHO, ezi mveliso kufuneka zifumaneke "ngamaxesha onke, ngezixa ezaneleyo kwiifom zedosi ezifanelekileyo, ngomgangatho oqinisekileyo kunye nolwazi olwaneleyo, kwaye ngexabiso umntu kunye noluntu abanokufikelela".
Amandla aphezulu aphezulu
Isitadi esinamandla aphezulu sisetyenziselwa ukulungisa kunye nokudibanisa umsebenzi kumatshini wokudibanisa. Zombini iziphelo zestudiyo zinemisonto, kwaye isikisi esiphakathi sinezinto ezishinyeneyo nezibhityileyo. Ibizwa ngokuba intonga ethe nkqo / intonga yokuncipha, ekwabizwa ngokuba kukujija kwentloko kabini. Ngokubanzi isetyenziswa koomatshini bemigodi, iibhlorho, iimoto, izithuthuthu, izakhiwo zebhayara, iipylon, izakhiwo zentsimbi ende kunye nezakhiwo ezinkulu.
Idiphu Hot kwalenza stud
Hot-dip iqaqanjiswa stud isetyenziselwa ukulungisa kunye nokudibanisa umsebenzi wokudibanisa oomatshini. Zombini iziphelo zestudiyo zinemisonto, kwaye isikisi esiphakathi sinezinto ezishinyeneyo nezibhityileyo. Ibizwa ngokuba intonga ethe nkqo / intonga yokuncipha, ekwabizwa ngokuba sisikere esineentloko ezimbini. Ngokubanzi isetyenziswa koomatshini bemigodi, iibhlorho, iimoto, izithuthuthu, izakhiwo zebhayara, iipylon, izakhiwo zentsimbi ende kunye nezakhiwo ezinkulu. Emva konyango olushushu lokwenza umphezulu, ifuthe le-antirust liyaphunyezwa.
U-Elon Musk ka-Tesla uthetha malunga noyilo olulodwa kunye nesicwangciso sokulungisa ukungqubana
Hebei Tailian lokuvala co mveliso., Ltd wakhethwa njengenye yamashishini abucala 500 e China.
U-Hebei Tailian Fastener Manufacturing Co., Ltd. ubuyile emsebenzini ngokugqibeleleyo
IsiXeko seHlabathi seKhompyutha se-Hardware c3-3, iSithili saseYongnian, iSixeko sase Handan, kwiPhondo lase-Hebei, e-China
Umnxeba: 0086- 0 0 310-6666399
Ifeksi: 0086- 0 0 310-6666399